Nin kale oo Soomaali ah oo lagu dilay dagaalka Ciraaq – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya dalka Ciraaq ayaa sheegaya inuu halkaas ku geeriyooday nin Soomaali ah, kaasoo ka mid ah ragga u jihaadka doontay dalkaas, kana barbbar dagaalamay dowladda Islaamiga ah ee horay loogu yaqaanay Daacish ama ISIS.
Ninkaan Soomaaliga ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey Abuu Muqdisho ayaa la sheegay inuu ku dhintay dagaal ka dhacay gudaha dalka Ciraaq.
Abuu Dhari-almuhaajir oo isna ah Soomaali ah kuna sugan Ciraaq ayaa bartiisa Twitterka soo geliyay war kooban oo uu ku sheegayay in Abuu Muqdisho ku shahiiday dagaal ka dhacay Ciraaq, sida uu warka u dhigay.
Lama sheegin halka uu kasoo dagaal doontay Abuu Muqdisho balse intabadan dhalinyarada Soomaalida ee ka dagaalamaysa Suuriya iyo Ciraaq ayaa ka tagay wadamada qaaradda Yurub iyo Ameerika.
Dhawaan ayay aheyd markii sidan oo kale ay soo baxday geerida wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Faarax Maxamed Faarax Shirdoon, kaasoo isna lagu dilay dagaal ka dhacay Ciraaq, wuxuuna markii hore ka yimid dalka Kanada.
Dalalka Suuriya iyo Ciraaq ayaa waxaa ka dagaalama Soomaali badan oo aan tiradooda la heyn oo ay xitaa ku jiraan kuwa indhoolayaal ah, sidoo kale waxaa ku jira wiil uu dhalay siyaasiga Feysal Cali Waraabe.
Guddiga Salafiyiinta Urdun ayaa tirakoob ay sanaddii lasoo dhaafay soo saareen ku sheegay in 40 Soomaali ah ku dhinteen dagaallo kooxaha Islaamiyiinta ah la galeen ciidanka Bashaar Al-asad.
Taliye ka tirsan Nabad Sugidda oo ka badbaaday qarax gaariga loogu xiray